Waxaa qoray: Balaleti 30-January-2012	27 fekradood
Barnaamijkaan waxaan ku soo qaadanaa wararka xanta ah ee ay wargeysyada ugu waa weyn qaarada yurub ay ka qoraan suuqa kala iibsiga. Suuqa kala iibsiga waxaa ka dhiman haatan hal maalin kaliya.
Kooxda Liverpool ayaa dooneysa inay amaah ku qaadato 27 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City Carlos Tevez, waa hadii kooxdiisa ay u ogolaato inuu baxo ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Sidaasi waxaa qortay Daily Mirror.
Dhinaca kale, West Ham ayaa sugi doonta ilaa uu suuqa kala iibsiga ka xirmo si ay isagu dayaan inay amaah uga soo qaataan City ciyaaryahankoodii hore Carlos Tevez, madaama ay ka ciyaaraan heerka labaad. Sidaasi waxaa qortay Daily Telegraph. Everton ayaa ku sii dhaweyneysa inay heshiis la gaarto kooxda Rangers oo ku aadan 26 jirkooda weerarka ka ciyaara Nikica Jelavic, waxaana lagu wadaa inay ka bixiyaan 6 milyan ginni. Sidaasi waxaa qortay Daily Express.
Arsenal ayaa diyaar u ah inay si yaab leh u dalbato daafaca 25 jirka kooxda Watford Adrian Mariappa, iyadoo Watford laga yaabo inay aqbasho labo milyan oo ginni. Sidaasi waxaa qortay The Sun.
Kooxda badan oo Premier League ah ayaa indhaha kuwada haya xiddiga kooxda Lille Eden Hazard oo 21 jir ah ka dib markii uu qirtay inuu xagaaga doonayo inuu u dhaqaaqo England. Sidaasi waxaa qortay talkSport.
Tababaraha kooxda QPR Mark Hughes ayaa laga yaabaa inuu soo xerogeliyo ciyaaryahankii hore ee Chelsea Michael Ballack oo 35 jir ah, kaasoo laga yaabo inuu ka soo tago kooxda Bayer Leverkusen. Sidaasi waxaa qortay Footybunker.
Kooxda Tottenham ayaa tartan adag waxa ay kala kulmeysaa saxiixa weeraryahanka reer Brazil Leandro Damiao, iyadoo Paris Saint-Germain ay sidoo kale dooneyso 22 jirkaasi. Sidaasi waxaa qortay Metro.
Kooxda Chelsea ayaa waxa ay 1 milyan ginni ku dalbatay 18 jirka kooxda Nottingham Forest weerarka uga ciyaara Patrick Bamford, kaasoo ciyaaray 12 daqiiqo oo kubad oo heer caalami ah. Sidasi waxaa qortay Daily Mail. Arsenal ayaa kula biirtay kooxda Real Madrid iyo Valencia tartanka loogu jiro 17ka jrika weerarka uga ciyaara koxda Alcoyano Lucas Torres. Sidaasi waxaa qortay Inside Futbol.
Weeraryahanka kooxda Liverpool Andy Caroll ayaa qirtay inuu doonayo inuu sii joogo Anfield inkastoo la isla dhexmarayo warar xan oo ku aadan inuu qeyb ka yahay heshiis loogu soo bedelanayo weeraryahanka Manchester City Carlos Tevez ama inuu ku laabanayo kooxdiisii hore ee Newcastle United. Sidaasi waxaa qortay The Sun.
Xiddiga kooxda Genk Kevin de Bruyne ayaa tagay England si uu u gabgabeeyo heshiiskii uu ugu wareegi lahaa Stamford Bridge. Waxa uu Chelsea ugu soo wareegi doonaa heshiis lacageed oo gaaraya 6.5 milyan ginni, lakiin waxa uu inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ku sii negaan doonaan Belgium. Sidaasi waxaa qortay Independent.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa maanta la kulmi doonta Inter si ay isagu dayaan inay soo gabgabeeyaan saxiixa ciyaaryahan Thiago Motta. Waxaa laga yaaba inay ku iibsadaan 10 milyan euro, lakiin rajada laga qabo inuu heshiis dhaco ayaa aad u yar. Sidaasi waxaa qortay jariirada France ka soo baxda ee L’Equipe.
Kooxda Juventus ayaa xaqiijisay in weeraryahankooda Luca Toni uu u saxiixay kooxda ka dhisan Imaraadka Carabta ee Al Nasr. Sidaasi waxaa lagu qoray webka Juve.
Kooxda Inter Milan ayaa qarka u saaran inay soo gabgabeyso heshiis ay kula soo wareegyso ciyaaryahanka kooxda FC Porto Fredy Guarin. 25 jirkaan oo hore ay u dooneysay kooxda Juventus ayaa lagu soo waramayaa inuu noqon doono ciyaaryahan Inter ah ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga xirmin berrito. Sidaasi waxaa qortay Football Italia.
Tababaraha kooxda Inter Claudio Ranieri ayaa isna sheegay inuusan filaneynin in Thiago Motta uu ka tagayo kooxda ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. Sidaasi waxaa qortay jariirada La Gazzetta dello Sport.
Kooxda Juventus ayaa ku dhow inay soo xergeliso ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Caglairi Nainggolan, iyadoo rajeyneysa inay heshiiskiisa soo gabagabeyso ka hor inta uusan kala iibsiga xirmin. Sidaasi waxaa qortay Football Italia.
Kooxda AC Milan ayaa rajadeeda Tevez ay tahay mid weli taagan, iyadoo rajeyneysa inay ka dhaadhiciso Man City inay amaah ku qaadato inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Sidaasi waxaa qortay Corriere dello Sport.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Inter Coutinho ayaa qarka u saaran inuu si amaah ah ugu biiro inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxda Espanyol. Sidaasi waxaa qortay jariirada Marca.
Ciyaaryahan Kaka ayaa sheegay inuu hubanti dhanka mustaqbalkiisa ah ka helay madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez iyo tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho. Sidaasi waxaa qortay jariirada AS.
Barnaamijkeenii Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga ciyaartoyda, ayaa intaas inooga eg, waxaan isku soo laaban doonaa hadii eebe idmo xagaaga marka uu suuqa kala iibsiga furmo, berrito oo ah maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaan u soo geli doonaa si toos ah inagoo si toos ah idin kula socodsiin doona suuqa kala iibsiga iyo sida uu ugu soo xirmo yurub. Hadii aad dooneyso inaad si toos ah u la socoto ciyaaryahanka ay kooxdaada kama danbeyn la soo wareegi doonto berrito meelna ha uga dhaqaaqin Laacib.net hadii eebe idmo.
La Wadaag Maqaalkaan Asxaabtaada:FacebookTwitterGooglePinterestTumblrFekradaada Facebook Ku Dhiibo Ama Qeybta Hoose Ee Fekradaha: Fekradood ayaa laga bixiyay.	2012-01-30
WARARKA MAANTA	Rasmi: Madaxweynihii Hore Ee Xiriirka Kubada Cagta Qaarada Afrika Issa Hayatou Oo Loo Magacaabay Madaxweynaha Ku Meel Gaarka Ah Ee FIFA
Paul Pogba Oo Dhaawac Uga Baxay Tababarka Xulka Faransiiska Dibna Ugu Laaban Doona Magaalada Turin
Buugii Ugu Horeysay Ee Uu Qoro Jose Mourinho Oo La Soo Bandhigi Doono Isbuuca Danbe.